Заброшенный отель Бедугул Таман, Бали, Индонезия » Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Hotely nilaozana Bedugul Taman
Hotely nilaozana Bedugul Taman
Hotely nilaozana Bedugul Taman. Faritra fidirana
Topimaso momba ny hotely nilaozana any Bali
Angano mampatahotra no nosoratana momba azy. Matahotra ny hiditra ao amin'ny faritanin'ny hotely mbola tsy vita ny olona eo an-toerana amin'ny ankapobeny, raha heverina ho voaozona izany, ary misy aza milaza fa misy matoatoa ao amin'ilay hotely.
Raha ny fenitra Bali dia goavambe ny hotely, rihana efatra misy endrika tsy ampoizina. Terrain goavambe amin'ny gorodona rehetra, ary eo an-tampon-trano dia efa vonona ny hanao fialan-tsasatra kintana 5 eto.
Ny toerana toy izany hisaintsainana sy hialana sasatra dia tao an-tampon'ny hotely.
Atmosfera ao amin'ny hotely
Misokatra avy any an-tampon'ny trano fandraisam-bahiny iray i Panoramas
Ny tetikasa Bedugul Tamana dia nihevitra ny fananganana hotely kintana 5 mifanaraka amin'ny fenitra eropeana. Saika vita ny fanamboarana, saingy tsy nisokatra velively ny orinasa.
Manakaiky ny trano fandraisam-bahiny aza misy fivoahana manokana avy amin'ny lalana akaiky indrindra sy ny fijanonan'ny fiara. Saingy, ny vavahady dia voasakana amin'ny tariby manaingo. Misy trano kely eo akaiky eo, izay ipetrahan'ny olona iray, izay manangona sarany amin'ny fijerena fiara na bisikileta eo amin'ny fiantsonan'ny fiara.
Tsy tokony hatao ny mitsidika an'i Bedugul Taman rehefa avy ny orana na amin'ny zavona matevina. Noho ny tsy fahitana fahitana (rehefa dinihina tokoa, tsy misy jiro ao anaty trano, ary noho ny zavona dia tsy afaka mahita ianao na dia metatra vitsivitsy aza), dia mety ho sarotra be ny fizahana ilay zavatra.
Ao anatin'ny trano fandraisam-bahiny mihitsy dia afaka mandeha amin'ny toerana rehetra ianao, fa miomàna fa tondra-drano amin'ny tany sasany ny gorodona.
Hotely nilaozana any Bali. Fijery zanabolana
adiresy: Pondok Indah Bedugul — Abandoned Hotel, Jalan Kebun Raya 82191, Bedugul, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.298661, 115.175869
Fijery avy eny ambony tafon'ny hotely hafo
Rihana ambony amin'ny hotely
Panoramas avy any ambony tafon'ny hotely
Hotely nilaozana ao amin'ny sari-tany
Hotely nilaozana amin'ny sari-tanin'i Bali
toerana tena tsara. Tsy manoro hevitra ny handeha manokana aho, fa raha mandalo izany mankany amin'ny Farihy Bratan ianao, dia mendrika ny hitsidika azy io.
Tsara ny fomba fijery. Ary mahaliana ny mandeha manodidina ny hotely ihany. Tsy misy mitovy amin'izany any Bali. Hita izany fa ny trano fandraisam-bahiny dia natsangana niaraka tamin'ny filazany fa lafo vidy.
Mariho fa tsy io ihany no hotely nilaozana any Bali. Akaikin'ny moron-dranomasina Bias Tugel, any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Bali, misy hotely somary avela ihany koa.
Tsy avo lenta mihitsy io ho ilay natokana ho an'ity pejy ity fa manana toerana tokony hipetrahana ihany koa. Ekenay fa tsy dia mahaliana loatra izy io, ary tsy dia lehibe loatra, ary sarotra kokoa ny miditra. Zara raha hitanay teny amin'ny lalana feno olona izy. Mazava ho azy fa tsy ampitahaina amin'ny Bedugul Taman izy io, fa raha hanadio ny feon'ny fieritreretanao dia mendrika ny manonona azy io ho hotely iray nilaozana any Bali.
Tany amin'ity hotely ity. Miharihary avy hatrany fa teo ireo Rosiana. Betsaka ny rindrina mirakotra lamban'ny fefy Rosiana.
Ary mendrika ny hisarihana olona hatrizay mba hitondrany fomba mitovy amin'ny fitondran-tenany ao an-trano!